Dhakhaatiir doonaya in ay si bilaash ah u daweeyaan dad magangalyo doon ah - BBC News Somali
Koox dhakhaatiir heer sare ah oo reer Australia ah ayaa waraaq u diray dawladda iyaga oo soo jeediyay in ay dawayn bilaash ah u samaynayaan dadka magangalyo doonka ah ee ku nool Papua New Guinea.
Dad lagu qiyaasay 300 oo ruux oo magangalyo doon ah ayaa Jimcihii ka tagay xarun ay Australia dadka ku hayn jirtay oo ku taalla jasiiradda Manus ee dalka PNG, arrintaas oo Qaramada Midoobay ay ku tilmaantay "xoog kaga saarid".
Dadkaas ayaa sheegay in ay ammaankooda u baqayaan inta ay joogaan jasiiradda Manus Island oo hadda loo dajiyay si ku meelgaar ah.
Dhakhaatiirtu waxay sheegeen "in ay aad uga walaacsan yihiin" xalaadda caafimaadkooda jireed iyo midka maskaxeedba.
Australia ayaa dadka magangalyo doonka ah ee doomaha ku soo gala gaysa meelo ay ku xirto oo dalkeeda ka baxsan, siyaasaddaas oo ay ku sheegtay in ay dadka ka niyad jabiso in dadka wax tahriibiya ay dadka ka ganacsadaan iyo in badaha lagu shubo.
Ilaa 600 oo ruux oo magangalyo doon ah ayaa diiday in ay katagaan xero ku taalla jasiiradda Manus Island oo albaabada loo laabay 31 Oktoobar. Qaar badan oo ka mid ahna waxay ku sii jireen iyadoo ay xaaladdu aad u liidato ka dib markii biyihii iyo korontadii laga jartay.
Messi oo la kulmay wiil taageere u ah oo reer Afghanistan ah
"Anaga oo dhakhaatiir sarsare ah ayaan shaqsiyaad ahaan u sheegnay walaaca aan ka qabno xaaladda caafimaad iyo badqabka dadkii horay loo hayay" ayay dhakhaatiirtu ku qoreen waraaqda furan.
Dhakhaatiirtu waxay soo dhigeen in ay dhakhaatiir takhasus ah u duuliyaan jasiiradda, dawladda Australia-na ay ogolaato gargaarka iyo in ay fasax dublamaasiyadeed siiso.